Health - Siddhartha Post
स्वास्थ्य/जिवनशैली खानपानको सवालमा मांसहार र शाकाहारलाई दुई कित्तामा विभाजन गरिएको छ । अक्सर स्वादका पछाडि दौडनेहरु मांसहार भोजन नै रुचाउँछन् । किनभने यसबाट थरीथरीका व्याञ्जन बनाउन सकिन्छ । शरीरमा आवश्यक पोषक तत्वको अभाव पुरा गर्न पनि मासु खानैपर्ने तर्क कतिको
सिओल जाडो सिजनमा ओंठ र छाला फुट्ने समस्याले धेरैलाई सताउने गरेको पाइन्छ। चिसोले गर्दा छाला सुख्खा भई फुट्ने गर्दछ। ओंठका अलवा गाला र कुर्कुच्चा पनि फुट्ने र दुख्ने पीडा जाडो सिजनमा हुने गर्दछ। यसकारण ओंठ, गाला र छाला फुट्नबाट जोगाउन
स्वास्थ्य हुन त गर्भावस्थामा कब्जियत हुने संभावना अधिक हुन्छ । कब्जियतले पायल्स । यतिबेला महिलाको स्वास्थ्य फरक ढंगबाट गुज्रिरहेको हुन्छ । गर्भमा शिशुको विकासको कारण भइरहँदा महिलाको मासिक चक्र खण्डित हुन्छ । यही कारण कब्जियत हुन्छ । कब्जियत नै पायल्सको
काठमाडौं सायद तपाईं हामीमध्ये धेरै जनाले दिउसो तथा रातमा समेत मोबाइल फोन खेलाएर धेरै समय बिताउँदछौँ । आखिर मान्छेले आफ्नो जीवनकालमा ठ्याक्कै कति समय मोबाइल फोनको स्क्रिनमा हेरेर बिताउँछ होला ? हालैको एउटा अध्ययनले निकै रोचक तथ्य पत्ता लगाएको छ
मौसमी रुघा खोकी : आयुर्वेद र योगलाई उपयोग गरौं
स्वास्थ्य विश्वमा सबैभन्दा बढी लाग्ने स्वास्थ्य समस्या हो रुघाखोकी। मानिसलाई वर्षको एक–दुई पटकदेखि पाँच छ पटकसम्म रुघा लाग्न सक्छ। राइनो भाइरस, इन्फ्ल्युइन्जा आदिलाई रुघा लगाउने भाइरस भनिन्छ। रुघाखोकीलाई सरुवा रोगका रूपमा लिइन्छ। घरमा वा समुदायमा कोही एक जनालाई कसैलाई रुघा
स्वास्थ्य कोरोना संक्रमणको कारण अहिले सार्वजनिक यातायात सुरक्षित छैन । भिडभाड हुने सार्वजनिक यातायातभित्र भौतिक दूरी कायम राख्न पनि संभव हुँदैन । यस्तो बेला धेरैको निम्ति सजिलो विकल्प बनेको छ, पैदल हिँड्नु । खासगरी नजिकका गन्तव्यसम्म आउजाउ गर्नका लागि पैदल
स्वास्थ्य शोधकर्ताका अनुसार कोभिड–१९ को लागि जिम्मेवार कोरोना भाइरस नोट, फोनको स्क्रिन र स्टेनलेस स्टील जस्ता केही सतहमा २८ दिनसम्म बाँच्न सक्छ । अष्ट्रेलियाका नेशनल साइन्स एजेन्सीका अनुसार SARS-Cov-2 भाइरस केही सतहमा केही लामो समयसम्म जीवित रहन सक्छ । यो
छातीमा कफ जमेको छ?यसो गर्नुहोस !
स्वास्थ्य अहिले स्वास्थ्यमा कुनै समस्या देखिए धेरैलाई चिन्ता हुन्छ, कोरोना त होइन । तर, मौसम बद्लिने यो समयमा सामन्य स्वास्थ्य समस्या देखापर्छ । कसैलाई रुघा लाग्ने, खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, कफ जम्ने, जोर्नी दुख्ने आदि । कतिपय अवस्थामा घरेलु उपचारबाट
स्वास्थ्य कोरोना भाइरसको महामारीका कारण एकातिर सर्वत्र अस्तव्यस्त र त्रास छाएको । यसले हाम्रो स्वास्थ्य सजगता पनि बढाएको छ । औषधि वा उपचार मात्र सबैथोक होइन । खासमा त हामीले आफ्नो शरीरलाई नै रोग प्रतिरोधी बनाउन जरुरी छ । अतः
जानाकारी मान्छेले अक्सर आफुलाई सुन्दर देखाउन यत्न गरिहेका हुन्छन् । कसरी आफ्नो अनुहार, आँखामा चमक ल्याउने, कसरी कपाल नरम र बलियो बनाउने, कसरी ओंठ मुलायम बनउने, कसरी दाँत चम्किलो बनाउने, कसरी समग्र शरीरको ढाँचा आकर्षक बनाउने ? अक्सर मन्छे आफुलाई